ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်းနှင့် မြန်မာလွှတ်တော် ချစ်ကြည်ရေး ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ လာအိုအမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌမှ တည်ခင်းဧည့်ခံသည့် ဂုဏ်ပြုနေ့လယ်စာစားပွဲသို့ တက်ရောက်
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယက၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်း နှင့် အဖွဲ့ဝင်များအား လာအိုပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ H.E.
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်း လာအိုပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ် သမ္မတနိုင်ငံ သမ္မတနှင့် တာဝန်ရှိသူများအားတွေ့ဆုံ
(၃၅)ကြိမ်မြောက် အာဆီယံပါလီမန်များဆိုင်ရာ အထွေထွေညီလာခံသို့ တက်ရောက်ရန် အတွက် လာအိုပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ၊ ဗီယင်ကျန်းမြို့သို့ ရောက်ရှိနေသော ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်နာယက၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်းသည် စက်တင်ဘာလ ၁၅ ရက်နေ့ ၁၅၀၀ နာရီအချိန်တွင် လာအိုပြည
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်းနှင့်အဖွဲ့ဝင်များလာအိုပြည်သူ့ ဒီမိုကရက် တစ်သမ္မတနိုင်ငံ၊ ဗီယင်ကျန်းမြို့သို့ အာဆီယံပါလီမန်များ ညီလာခံ တက်ရောက်ရန်နှင့် ချစ်ကြည်ရေးခရီးရောက်ရှိ
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် နာယက၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်း သည် လာအိုပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ H.E.
ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးနန္ဒကျော်စွာ တရုတ်ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံ နိုင်ငံရေးအတိုင်ပင်ခံ ကွန်ဖရင့် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ ဗဟိုကော်မတီ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးဌာနဝန်ကြီး မစ္စတာဝမ်ကျားလွေ့ ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဒုတိယနာယက၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးနန္ဒကျော်စွာ သည် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံရေးအတိုင်ပင်ခံ ကွန်ဖရင့် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ တရုတ် ကွန်မြူနစ် ပါတီဗဟို ကော်မတီ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးဌာန၀န်ကြီး မစ္စတာဝမ်ကျားလွေ့ ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့အား ၂၀
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်းနှင့်အဖွဲ့ဝင်များဗီယက် နမ်နိုင်ငံမှ ပြန်လည်ထွက်ခွာ
ဗီယက်နမ်ဆိုရှယ်လစ်သမ္မတနိုင်ငံတွင်ချစ်ကြည်ရေးခရီး ရောက်ရှိနေသော ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် နာယက၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်း ခေါင်းဆောင် သော မြန်မာလွှတ်တော် ချစ်ကြည်ရေး ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် ၂၀၁၄ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၉ ရက်နေ့ ၁၀၀၀ အချိန်တွင် ဟိုချီမင်းမြို့ရှိ Phu M
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် နာယက၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်း ပေါလစ်ဗျူရို အဖွဲ့ဝင်(ဟိုချီမင်းမြို့)၊ ဗီယက်နမ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ အတွင်းရေးမှူး H.E. Mr. Le Thanh Hai နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေး
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် နာယက၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်း သည် ပေါလစ်ဗျူရိုအဖွဲ့ဝင်(ဟိုချီမင်းမြို့)၊ ဗီယက်နမ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ အတွင်းရေးမှူး H.E. Mr. Le Thanh Hai နှင့် စက်တင်ဘာလ ၈ ရက်နေ့ ညနေ ၆ နာရီတွင် ဟိုချီမင်းမြို့ Reunification Palace အစည်းအဝေးခန်းမဆောင်၌ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးသည်။
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်း ဗီယက်နမ်-မြန်မာချစ်ကြည်ရေး အသင်းဥက္ကဋ္ဌ H.E. Mr. Nguyen Manh Tien နှင့်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယက၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်း သည် ဗီယက်နမ် ဆိုရှယ်လစ် သမ္မတနိုင်ငံ၊ ဗီယက်နမ်- မြန်မာ ချစ်ကြည်ရေးအသင်း ဥက္ကဋ္ဌ H.E. Mr.
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်း ဗီယက်နမ် ဆိုရှယ်လစ် သမ္မတနိုင်ငံ သမ္မတ H.E. Mr. Troung Tan Sang အား သွားရောက်တွေ့ဆုံ
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်း သည် ဗီယက်နမ်ဆိုရှယ်လစ်သမ္မတနိုင်ငံ သမ္မတ H.E. Mr. Troung Tan Sang အား ၂၀၁၄ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၆ ရက်နေ့ နေ့လယ် ၁၄၀၀ နာရီ အချိန်တွင် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ၊ ဟနွိုင်းမြို့ရှိ သမ္မတအိမ်တော်သို့ သွားရောက်တွေ့ ဆုံ နှုတ်ဆက်သည်။
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်း ဗီယက်နမ် ဆိုရှယ်လစ်သမ္မတနိုင်ငံ၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ H.E. Mr. Nguyen Sinh Hung နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေး
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် နာယက၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်း သည် ဗီယက်နမ် ဆိုရှယ်လစ်သမ္မတနိုင်ငံ၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ H.E. Mr.
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌသူရဦးရွှေမန်းဖြူးမြို့နယ်ရှိကော်မတီများ၊ မြို့မိမြို့ဖများ၊ ဌာနဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိ သူများအားတွေ့ဆုံအမှာစကားပြောကြား
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌသူရဦးရွှေမန်းသည် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးဖြူးမြို့နယ်ရှိမြို့နယ် ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ မြို့နယ်လုံခြုံရေး၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် တည်ငြိမ် အေးချမ်းရေးကော်မတီ၊ မြို့နယ်စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီ၊ မြို့နယ် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ မြိ